Argagax Ka Dhashay Laba Iimaam oo Walaalkood ku Dilay Maraykanka | Aftahan News
Argagax Ka Dhashay Laba Iimaam oo Walaalkood ku Dilay Maraykanka
Kansas (aftahannews)- Magaalada Kansas City, ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka waxaa lagu dilay laba wiil oo ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed da’doodana lagu sheegay 14 iyo 16 jiro, sida ay sheegeen booliska iyo qaraabada marxuumiinta.
Laba Iimaam oo Soomaali ah oo Walaalkood ku dilay Maraykanka 2021
Dhalinyaradaan oo ah walaalo ayaa lagu kala magacaabi jiray Cabdiraxmaan Xuseen Cabdicasiis iyo Cabdiwaaxid Xuseen,waxaana dilka u gaystay walaalkood ka weyn xili ay ka soo baxeen salaadda Taraawiixda oo iyagu tujinayeen, sida uu BBC-da u sheegay Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo ay ehel dhow ahaayen.
“Waxay wax u dhaceen in labada wiil ee geeriyootay iyo wiil kal eoo la socday ay ka soo baxeen Taraawiixda ragga masaajidka ku tukadda oo ka mid ah akhyaarta ayaa soo qaaday guriga illinkiisuu dhigay gurigii markay is dhaheen saddexdoodii gala ninka dili doona ka soo baxay meeshuu ku sugayay labada dhalinyarada ah” ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Cabdi.
Hanad Cabdullaahi Cabdicasiis oo 25 jir ah laguna tuhunsanaa dilka ayay boolisku isku dayeen in ay la hadlaan markii uu falka gaystay kadib haseyeshee wuxuu ula soo baxay qori kadibna xabado ayuu ku furay taas oo keentay in boolisku ay toogtaan oo ay dhaawacaan .
Hanad oo ahaa 24 jir ayaa 2 wiil oo la dhalatay toogasho ku dilay
Maxamed ayaa intaa ku daray in walaidiintii dhalinyaradaan geeriyootay ay iyaguna horey u geeriyoodeen.
Dhacdadaan oo dadka ku dhaqan Magaalada Kansas City ee dalka Mareykanka ay aad uga naxeen ayaa sidoo kale aad loogu faafiyay baraha bulshada. Muuqaallada baraha bulshada lagu baahiyay ee wiilasha geeriyooday waxaa ka mid ah iyaga oo Salaaddii Taraawiixda xalay tujinayay dadka,waxaana la sheegayaa in ay ahaayen dhalinyaro qur’aanka xifdisay.